Iceweasel 8 dị na Debian Ule | Site na Linux
Ebe ọ bụ na ụnyaahụ anyị nwere mbipute 8 nke Iceweasel en Nyocha Debian, ọ bụ ezie na n'eziokwu ọ gbasaghị m n'ihi na m na-anọgide na-eji ya chromium.
Dị ka Firefox, Iceweasel na taabụ 2 mepere ọ na-erepịa m karịa 100 Mbmgbe chromium adịghị gafere 70 Mb. Mana agbanyeghị, ọ bụrụ na anyị chọrọ ịwụnye ya na Debian anyị ga-etinye nchekwa Debian Testing na isi mmalite anyị.list
Melite ma wụnye Iceweasel:
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Iceweasel 8 dị na Debian Testing
Ọfọn, enwere m obi abụọ banyere nke na-eripịa ọtụtụ ihe.
N'oge na-adịbeghị anya, na-arụzi PC m, ekwesịrị m iji laptọọpụ ochie jiri naanị 512 MB Ram na 1 Intel Pentium M 4.
Nke bụ eziokwu bụ na awụnyere m distro dabere na MEPIS na fluxbox, yana ịnyagharịa na Chromium, nke mepere ọtụtụ taabụ nyere njehie, ọ ga-akụ. Na Firefox 7.0.1 ọ dị nwayọ ma ọ bụrụ na m mepee ọtụtụ taabụ mana ọ bụ, yana ole na ole ọ dị mma maka laptọọpụ shitty ahụ.
Laptọọpụ shit ị na-ekwu? PC nke nwere 512Mb nke RAM maka anyi bu ihe di nma. Amaghị m ụdị nke Chromium ị na-eji, mana na PC m (nke ọma, na PC m ọrụ) yana 1Gb nke RAM, Chromium 15 na-eme nke ọma karịa Iceweasel / Firefox .. 😀
Simon, ihe ị tụlere shitty PC, ebe a na mba m ka PC dị mma 😀 Amaghị m ụdị nke Chromium ị na-eji, mana na PC m na 1Gb nke RAM, ọ na-akpa àgwà ka mma karịa Iceweasel mbipute 15.
Onye sabo, hahahahahaha.
Abụghị m onye sabo, Mozilla anaghị enye m ihe m chọrọ.
Ndenye nke ụdị a bụ nnabata: dị… na nyocha debian
Ezi na na na, ekele 😀
Ndewo Elav. Dị ka ọ dị na mbụ, daalụ maka isiokwu gị; na-ekelekwa Gaara maka nke ya. Ha na-arụpụta ezigbo obere. Ọ dị m ka ya bụrụ na m nwere ọzụzụ ahụ wee bido blog nke m Ọ dị mma, achọrọ m ịjụ ajụjụ: kedu ihe ndịiche dị n'etiti Firefox na Iceweasel? Echere m na ha nwere ihe jikọrọ ha, mana amaghị m ihe ọ bụ; Amaghịkwa m ihe mere ha ji dị iche. Daalụ.
Daalụ maka okwu gị Carlos-Xfce:
Ọ bụ eziokwu na ijigide blọọgụ na-agbagwoju anya mgbe ụfọdụ, ị ga-etinye nnukwu ọchịchọ na ike n'ime ya, mana mgbe ị gụrụ azịza dịka gị, a na-akpali gị. N'ezie, mgbe ị na-akwụ ụgwọ maka ide ihe ma nweta ezigbo ego (ọ bụghị ikpe anyị) ọ na-akpalikwa hahahahaha .. Ọ dịghị ihe, na-alaghachi n'okwu ahụ:
Ihe dị iche n'etiti Iceweasel na Firefox na tiori bụ naanị aha ha jiri. Dabere na Debian Philosophy ha enweghị ike iji aha Firefox n'ihi na ọbụghị nke ikikere anaghị anabata ya, na nkenke, ihe ha mere bụ ndụdụ ma gbanwee aha ahụ. Ugbu a, ha nwere ike gbanwee n'ime, ma ọ bụ na ha ejikọtaghị ya na ụfọdụ oke, amaghị m. Maka onye ọrụ ọ ga-abụ nke zuru oke.
Ndewo, m ọzọ. Amaghị m ihe na-eme LMDE m. Enwere m Firefox 7, emelitere m otu ụbọchị (mgbe ụdị nke 8 apụtaworị) m wee tinye 5. Ugbu a, m wụnye Iceweasel dị ka ọ na-ekwu ebe a na, mgbe m meghere ya, ọ na-emepe taabụ ndị m nwere na Firefox na ụdị Iceweasel. o bukwa 5. A masiri m LMDE mana enwerem otutu nsogbu na &% $ @ € ¿!!! Firefox.
Nsogbu ya bụ ihe ndị a:
LMDE wụnye Firefox 5 na / opt ma banye mmelite, ọ na-edegharị ihe niile dị ebe ahụ. Eleghị anya ị tinyere ụdị nke 7 na folda ahụ na ihe m gwara gị na ọ mere. Anaghị m eji LMDE ugbu a, mana echere m na ụdị ọhụrụ nke Iceweasel ga-abanyeworị na ebe nchekwa LMDE ebe ọ bụ na anyị nwere nsụgharị 8 na Debian Testing.
M ọzọ. Na nkọwa m gara aga enwere nsogbu na mmechi nke nne na nna na-esote "8" nke ụdị nke Firefox m na-ekwu maka ya: o tinyere enyo ya na iko.
Achọrọ m iceweasel, enwere m mmasị n'ọdịdị ya, ogwe ntụgharị ya, n'ihe gbasara oriri ebule, enweghị m nsogbu, mana agụla m ụfọdụ okwu na blọọgụ ndị ọzọ maka ịkwado iceweasel ruo oke nri ebule, na mmechi, M arụnyere ma m na-ahọrọ iceweasel.
Ọ bụ gị na nhọrọ na anyị na-asọpụrụ na 😀
Unarchiver na-abịa na Debian Testing